24 Hwɛ, Yehowa resɛe asase no ma ada mpan.+ Wadan asase no ani abutuw+ ama ɛsofo ahwete.+ 2 Ɔmanfo ne ɔsɔfo tebea bɛyɛ pɛ; akoa ne ne wura bɛyɛ pɛ; afenaa ne n’awuraa bɛyɛ pɛ; nea ɔretɔ ne nea ɔretɔn bɛyɛ pɛ; nea ɔde fɛm ne nea ɔfɛm bɛyɛ pɛ; nea ogye mfɛntom ne nea otua mfɛntom bɛyɛ pɛ.+ 3 Asase no bɛda mpan na wɔbɛfa so nneɛma nyinaa,+ efisɛ Yehowa ankasa na waka.+ 4 Asase no redi awerɛhow+ na abotow. Asase no akisa na abotow. Na asase no so akɛsefo akisa.+ 5 Asase no sotefo ama ho agu fĩ.+ Wɔakwati mmara no,+ wɔasesa ahyɛde no,+ na wɔabu daa apam no so.+ 6 Eyi nti na nnome amene asase no,+ na wɔn a wɔte so no di fɔ. Ɛno nti na asase no sofo so ahuan no, na aka ateasefo kakraa bi.+ 7 Nsã foforo redi awerɛhow, bobe akisa,+ na wɔn a wɔn koma ani agye nyinaa si apini.+ 8 Mpintin mu ahurusidi aba awiei, ahosɛpɛwfo dede to atwa, na sanku mu ahurusidi aba awiei.+ 9 Wɔmfa dwonto nnom nsã, na mmosã yɛ nsanomfo anom nwene. 10 Kurow a ɛda mpan no, wɔadwiriw agu;+ wɔato fie biara mu, na obi ntumi nkɔ mu. 11 Wosu nsã kɔm wɔ mmɔnten so. Anigye nyinaa atwam kɔ, na asase no so ahurusidi atu ayera.+ 12 Ahodwiriwde nko na aka kurow no mu, na wɔabubu ɔpon no pasaa.+ 13 Saa na ɛbɛto asase ne nnipa no. Ɛbɛyɛ sɛ nea wɔrewosow ngodua,+ te sɛ nea wɔatew bobe awie na wɔresesaw ase.+ 14 Wɔbɛma wɔn nne so adi ahurusi. Na Yehowa kɛseyɛ nti wɔbɛbɔ ose afi po so.+ 15 Eyi nti wɔbɛhyɛ Yehowa anuonyam+ wɔ hann fibea,+ na wɔbɛbɔ Israel Nyankopɔn Yehowa din+ wɔ po so nsupɔw so. 16 Yɛte nnwom fi asase no so akyirikyiri+ sɛ: “Anuonyam nka Ɔtreneeni no!”+ Na meka sɛ: “Mafɔn,+ mafɔn! Asɛm ato me! Nkontompofo di nkontomposɛm.+ Nkontompofo nam nkontompo so di nkontomposɛm.”+ 17 Wo a wote asase so, ehu ne amoa ne afiri wɔ hɔ ma wo.+ 18 Na obiara a ɔbɛte ahude nka a obeguan no bɛhwe amoa mu, na obiara a obefi amoa mu no, afiri beyi no.+ Ɔsoro mfɛnsere bebue+ na asase nnyinaso awosow.+ 19 Asase no mu apae, asase no wosow, na asase no hinhim.+ 20 Asase no hinhim sɛ ɔsabofo, na ɛtɔ kɔ afã afã te sɛ ɔwɛmfo apata.+ N’amumɔyɛsɛm ayɛ no so duru,+ na ɛbɛhwe ase a ɛrensɔre bio.+ 21 Saa da no Yehowa bebu ɔsoro asraafo atɛn wɔ soro, na obebu asase so ahene atɛn wɔ fam.+ 22 Wɔbɛboaboa wɔn ano sɛnea wɔboaboa nneduafo ano gu amoa mu,+ na wɔbɛto wɔn mu ahyɛ afiase,+ na nna bebree akyi no, wɔbɛdan aba wɔn so.+ 23 Ɔsram anim agu ase, na owia ani awu,+ efisɛ asafo Yehowa di hene+ anuonyam+ mu wɔ Bepɔw Sion+ so ne Yerusalem, ne mpanyimfo anim.